साताका ब्लगर : शेर बहादुर भुजेल - MeroReport
साताका ब्लगर : शेर बहादुर भुजेल
विगत ६ वर्षदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका शेरबहादुर भुजेल दोलखाको सामुदायिक रेडियो कालिञ्चोक एफएममा समाचार संयोजक साथै कालिञ्चोक सन्देश साप्ताहिकको प्रबन्धको रुपमा कार्यरत छन् । साहित्य र लेखनमा बढी रुची राख्ने भुजेल ब्लग एवम् सामाजिक सञ्जालमा छाईरहन मन पराउँछन् । जलवायु परिवर्तन मुख्य विषय रहेको रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने उनी स्मृतिकुञ्ज नामक आफ्नो ब्लगमा भने समाचार, फिचर जस्ता सामग्री पस्किन्छन् । ब्लगिङ् सुरु गरेको एक वर्ष पनि भएको छैन । तर पनि स्थानीय एवम् सामाजिक विषयवस्तुलार्इ प्राथमिकता दिर्इ तयार पारिएका सामग्री साथै सामाजिक सञ्जालमा रहेको सक्रियताले भुजेल छोटो समयमै राम्रा ब्लगरका रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएका छन् । प्रस्तुत छ, भुजेलसँग मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरका लागि दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :
करिब ९-१० महिना जति भयो । पहिले त दोलखामा इन्टरनेटको त्यति राम्रो सुविधा थिएन । जब मेरो रिर्पोटमा जोडिन पुगें अनि ब्लगका बारेमा धेरै कुरा थाहा पाएँ । त्यस लगत्तै ब्लग बनाएको थिएँ । त्यति चलाइन । गएको बैशाखतिर हो, इक्वेल एक्सेसले चरिकोटमा न्यु मिडियाको बारेमा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । जुन कार्यक्रममा मैले ब्लगको बारेमा धेरे थाहा पाएँ । अनि पुनः सुरु गरेको हो ।
मैले ब्लगमा धेरै कुराको संयोजन गर्ने प्रयास गरेकोछु । ताजा जानकारीहरु, आलेखहरु र फोटोहरुलाई मिलाएर राख्ने प्रयास गरेको छु । रमाइला कुरा अनि आफ्ना मनका भावनाहरुलाई पनि मिलाएर राखेकोछु । कहिले काहीँ स्टोरीफाईले पनि स्थान पाउँछ भने कतै अरुले राखेका राम्रा सामग्री भेटेमा स्रोत उल्लेख गरी राख्ने गरेकोछु । खासमा सबैकुरालाई संयोजन गर्ने प्रयास गरेकोछु ।
खासमा ब्लगमा आफूलाई मन परेका कुरा लेख्न पाइन्छ । खुलस्त भएर भावना पोख्न पाइन्छ । एकैपटक धेरैसामु पुर्याउन पाइन्छ । अनि लेखन सीपको विकास हुन्छ भनेर ब्लगिङ गर्ने गरेको हुँ । पत्रकारिता पेशामा आवद्ध भएकाले नयाँ नयाँ जानकारीहरु आइरहेका हुन्छन् । त्यसलाई बाड्न पाउँदा रमाइलो लाग्छ । अनि ब्लगिङ गरेपछि ति सामग्रीहरु दस्तावेजको रुपमा सुरक्षित पनि हुन्छन् । अर्को कुरा ब्लगमा लेखिएको समग्रीलाई फेसबुक वा ट्वीटरबाट पनि शेयर गर्न मिल्ने भएकाले पनि ब्लगमा लेख्ने गर्छु ।
ब्लगका लागि अलग्गै समय खर्चिनुहुन्छ कि अन्य सञ्चारमाध्यमका लागि गरिएका सामग्री नै ब्लगमा पोष्ट गर्नुहुन्छ ?
कहिले काहीँ भने ब्लगका लागि भनेर केही मनका भावनाहरु कोरीन्छ । व्लगमा पोष्ट गरिन्छ । पत्रकारिता मुख्य पेशा भएकाले अन्य सञ्चार माध्यमका लागि गरिने रिर्पोटिङलाई पनि ब्लगमा राख्ने गरेको छु । धेरै सामग्री यस्तै छन् मेरो ब्लगमा । ब्लगका लागि भनेर समय खर्चेर मैले केही विषयका स्टोरीफाई भने गर्ने गरेको छु ।
फुर्सद मिलेसम्म पढ्ने गरेकोछु । लिंक भेटेसम्म पढ्ने गरेकोछु । फुर्सद अलि कम हुन्छ तर पनि अरुका ब्लग हेर्दा धेरै कुराको जानकारी मिल्ने, लेखन शैलीको नयाँ तरीका थाहा हुने भएकाले धेरै पढ्ने र आफू भने थोरै पोष्ट गर्ने गरेकोछु ।
धैरैका लिंक त मेरोरिर्पोटमै छन् । नयाँ को आए भनेर हेर्छु । पुरानाका पनि पढीरहन्छु । मेरो रिर्पोट मार्फत नै । कहिले काहीँ फेसबुक र ट्वीटरमा आएका पनि पढछु । खासगरी बाबाजी, इन्द्रध्वज क्षेत्री, रुपेश श्रेष्ठ, दुर्गा लामिछाने, कृष्ण गुरागाई आदिका ब्लग धेरै हेर्छु । अझ पत्रकार साथीहरुको त भेटे सम्म छुटाउँदिन ।
आफू पत्रकार भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रका विषयहरु बढी मनपर्ने त भयो नै । त्यससँगै कुनै साझा सरोकारका विषयमा निजी विचारहरु समावेस गरी लेखीएका ब्लग मनपर्छ । साहित्य र नयाँ प्रविधिका बारेमा जानकारी दिने खालका ब्लग पनि मनपर्छ । राजनीतिक टिकाटिप्पणी, अनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा लेखिएका ब्लगहरुले बढी मन तान्ने गर्छन् ।
तपाईँ त आमसंचारको क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्ति पनि । आमसंचारको विषयवस्तु र ब्लग विषयवस्तुमा के फरक पाउनु भयो ?
सुरुमा मलाई ब्लग त आमसञ्चार माध्यम जस्तो होइन, यसमा जे पनि लेख्न पाइने रहेछ कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तर मेरोरिर्पोट भित्र छिरेपछि ब्लगिङको आचार संहिताको बारेमा पनि थाहा भयो । त्यसपछि ब्लग लेख्नका लागि पनि केही नियमहरु रहेको कुरा थाहा पाएँ । अहिले म त्यसको पालना पनि गरीरहेको छु सकेसम्म ।
आम सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल एक अर्काका परिपूरक नै हुन् जस्तो लाग्छ । मलाई अझ पछिल्लो समय त आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरु एक रथका दुई पांग्रा जस्तै भएका छन् । त्यसैले मैले भने आमसञ्चार र ब्लग लेखनमा खासै भिन्नता पाएको छैन तर के भने ब्लगमा धेरै मात्रामा आफ्ना निजि धारणा राख्न छुट भने आम सञ्चार माध्यमका केही बञ्देजहरु छन् । ब्लगहरुले धेरै विचारको सिर्जना गर्छन् ।
आमसञ्चार माध्यमले जानकारी दिने काम बढी गर्छन् भने सामाजिक सञ्जालहरुले विचार निर्माणका लागि बढी जोड दिने भएकाले ब्लगमा पनि बढी मात्रामा आफूलाई भन्न मन लागेको कुरा सभ्य भाषामा खुलस्त भएर राख्न पाइन्छ । फरक यति हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
ब्लगिङ्का बारेमा रहेको आचारसंहिता आफूले त पालना गरिरहेको बताउनु भयो । ब्लगिङ् सम्बन्धी आचारसंहिता लागु गर्नु आवश्यक छ कि छैन जस्तो लाग्छ ?
धेरै जसोले त पालना गरे जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसो भनेर पालना नभएकै भने चाँही होइन । वहाँहरुलाई थाहा भएर हो वा थाहा नभएर पनि होला, धरै जसो भाषागत रुपमा केही त्रुटीहरु देखिने गरेको छ । बढी आक्रोश र गाली गर्दैमा राम्रो भइने होइन । सकेसम्म तथ्यमा आधारित भएर खबरदारी गर्दा हुने कुरामा बढी गाली किन गर्ने? ब्लगिङका लागि ब्लगरहरुले तयार पारेको सामान्य आचारसंहिता मात्र पालाना गरिदिएमा पनि पुग्छ, जुन मेरोरिपोर्टमा राखिएको पनि छ । त्यो पूरा गर्न खासै गाह्रो पनि छैन । सामान्य ब्यक्तिभन्दा पनि कहिले काहीँ त नाम चलेका व्यक्तिहरुको तरीका देख्दा भने बढी दिक्क लाग्छ ।
दोलखामा ब्लग लेखन कत्तिको चलेको छ ?
दोलखामा ब्लग लेखनको प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसका लागि हामीले इक्वेल एक्सेसलाई विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ । किनकी दोलखाका पत्रकार साथीहरुलाई भेला पारेर सामाजिक सञ्जालको महत्वको बारेमा जानकारी गराएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने र ब्लगिङ गर्ने लहर बढेको छ । पत्रकार साथीहरु मलाई पनि लौ न मेरो पनि ब्लग बनाउँनु पर्यो भनेर अनुरोध गरी रहनुहुन्छ । अर्जुन अपवाद, प्रलाद आचार्य, राजेश भुजेल लगायत पत्रकार साथीहरु बढी मात्रामा ब्लगिङ गरीरहनु हुन्छ । ब्लग लेखनको आकर्षण दोलखामा आशालाग्दो छ ।
रमाइलो भन्दा पनि ब्लगिङ गरिएका सामग्रीहरु धेरैले पढेको थाहा पाउँदा रमाइलो लाग्छ । कसैले मलाई फोन गरेर पनि प्रतिकृया दिनुहुन्छ । मेरो ब्लग हेरेर दोलखामा अग्रज पत्रकार दाजु चिरञ्जीवी मास्केले मलाई लौ न मेरो पनि ब्लग बनाई देउ भनेर धेरै पटक भन्नुभयो । मैले त्यो काम भ्याएको छैन् ।
अर्को कुरा नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धर ब्लग लेखन र ट्वीटर प्रयोगको बारेमा जानकारी लिन भन्दै एकदिन मेरो अफिसमै पो आउनु भएछ । फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठले दोलखाकी विपन्न बालिका भावना थामीलाई सहयोग गरेको बारेमा मैले ब्लग लेखेको थिए पत्रकारिताको शक्ति र भावनाको उद्धार । त्यो पढेपछि मलाई धेरैले मलाई पो फोन गरेर नरेन्द्रलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
एउटा पत्रकार समेत भएको हुँदा तपाईँले ब्लगमा राख्ने सुचनामुलक सामग्री त्यहाँ राख्नुको साटो कार्यरत संचारमाध्यममा नै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरु कत्तिको आउँछ?
त्यो त आउछ नै । तर त्यसमा अरुनै साथीहरुले राख्ने काम गर्छन् मैले त अरु साथीहरुलाई संयोजन गर्ने काम गर्ने भएकाले त्यसमा भन्दा मैले आफ्नो ब्लगमा राख्ने गरेको हो । साथीहरुले पनि तपाईले बनाएको सामग्री पहिला ब्लगबाट सार्वजनिक नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो की भनेर पनि भन्ने गर्छन् ।
तर मलाई पहिला सार्वजनिक गर्दा रमाइलो लाग्छ । अनि मेरो ब्लगका भिजिटर पनि बढ्छन् । फेरी सबै सामग्रीहरु मैले काम गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुमा अटाउने पनि गर्दैनन् । तर कहिले काँही भने आफैलाई नैतिक संकट पनि पर्नेगर्छ ।
त्यस्तो कुनै घटना छ?
खासै त छैनन्। तर करिव ३ महिना अगाडी मैले ब्लगमा एउटा रमाइलो सामग्री र फोटोहरु पोष्ट गरें। 'अनौठो केरा फलेपछि हेर्नेका ओइरो' भनेर । त्यो त्यति ठूलो समाचार त थिएन तर मैले ठुलै चूनौतीको सामान गर्नुपर्यो । मेरो ब्लग हेरेर अरु साथीहरुले समाचार बनाएर पत्रिकामा छपाएछन् फोटो पनि राखेछन् । तर त्यो सामग्री मेरा सञ्चारमाध्यमबाट आउन पाएन । पछि मलाई किन यस्तो भयो भनेर सोधेपछि मैले स्पष्टिकरण भने दिनु परेको थियो ।
हा हा ! यो त रमाइलो प्रश्न सोध्नु भयो । केही हजार नाघेका छन् । अनि दिनमा त्यस्तै २०/२५ जनाले भिजिट गर्छन् । यो छोटो अवधिमा धेरै हो । किनकी मैले ब्लग सुरु गरेको १ वर्ष पनि पुगेको छैन् । अनि त्यति धेरै ब्लगिङ गर्न पनि भ्याएको छैन्, आफूले सोचे जति ।
भनेपछि ब्लगको प्रचार प्रसार निक्कै भए जस्तो छ ।
त्यस्तो धेरै प्रचार त भए जस्तो लाग्दैन । त्यही फेसबुक र ट्वीटरमा लिंक शेयर गर्ने हो । त्यो आफूले पनि गरिन्छ । अनि कहिले काहीँ अरु साथीहरुले पनि गरिदिन्छन् । पत्रकार प्रलाद आचार्यजीले कहिले काहीँ कालिञ्चोक एफएमको फेसबुक पेजबाट पनि लिंक शेयर गरिदिनु हुन्छ । त्यति हो ।
ब्लगिङ गर्दा र सोसल नेटवर्किङ साइटमा बहस गर्दा केही फरक महसुस गर्नुभयो कि उस्तै लाग्यो ?
ति सबैको आ-आफ्नै महत्व र विशेषता छ। ब्लगमा धेरै कुरा लेख्न सकिन्छ समाचार जस्तैगरी । लिंक शेयर गर्न सकिन्छ । ब्लगलाई दर्ता गरेर आधिकारिक वेभसाइट बनाउन पनि सकिन्छ । ट्वीटरमा थोरै अक्षरमा धेरै कुरा बुझाउने गरी लेख्नु पर्दा, लेखन शैली तिखारिन्छ ।
सेड्युल बनाएर लिंक शेयर गर्न र ट्वीट गर्न मिल्छ । फेसबुक त झन् धेरैले चलाउने सामाजिक सञ्जाल, फोटो शेयर गर्नका लागि राम्रो छ, यस्तै हो । आ–आफ्नो इच्छा बमोजिम जे प्रयोग गर्दा रमाइलो लाग्छ वा मनपर्छ त्यही गर्ने हो । म ब्लगिङ पनि गर्छु सोसल नेटवर्किङ साइटमा पनि छु । सबै रमाइलो लाग्छ ।
सोसल मिडियामा आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, एउटा ब्लगरका रुपमा या पत्रकारका रुपमा ?
सोसल मिडियामा म आफूलाई एउटा ब्लगरको रुपमा चिनाउन चाहन्छु र यसका लागि म प्रयासरत पनि छु । ब्लगिङलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा सोचिरहेको छु । अस्ति भर्खर इक्वेल एक्सेसले आयोजना गरेको तालिममा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो । त्यसबाट पनि धेरै कुराको जानकारी भयो । ब्लगिङलाई कसरी सामाजिक हितमा प्रयोग गर्ने भनेर पनि सोचीरहेको हुन्छु ।
कुरो उठि हाल्यो, नेपाली ब्लगहरु सामाजिक हितमा लेखिएका कत्तिको पाउनु भएको छ ?
नेपाली ब्लगहरुमा मैले पाएको सामाजिक हितमा भन्दा आफ्ना निजि कुरा र विचार लेखिएका बढी छन् । साहित्य बढी लेखिएका छन् । मैले पनि त्यहि कुरालाई नै बढी पछ्याएको हुँला । मेरो भनाई अबका हाम्रा ब्लगका अक्षरहरुले समाज रुपान्तरणमा भूमिका खेलुन् भन्ने हो । हामीले समय खर्चेर गरेको ब्लगिङले कसैको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने हो । अब हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्न खोजेको हुँ । तर के भने सामाजिक हितका पक्षमा ब्लग लेखिएकै छैनन् भन्ने चाहीँ होइन् ।
मैले गएको अगष्ट २२ मा एउटा घटनालाई ब्लगिङ गरेको थिएँ । कसले सुन्ने मैनाको दुःखेसो शिर्षकमा । श्रीमान् वेपत्ता हुँदाको पीडालाई त्यस घटनामा समावेश गरिएको थियो । जुन मेरो गाउँ दोलखाको पवटी गाविसकै पनि थियो । त्यो सामग्री धेरै जनाले मन पराउनु भयो । कतिले त फोन पनि गर्नुभयो ।
मैले ब्लगबाट केही पनि गुमाए जस्तो लाग्दैन बरु मैले धेरै कुरा पाएको छु । तपाईसँग यसरी भलाकुसारी गरी केही कुरा राख्ने मौका पाएँ । देखे सुनेका अनि बुझेका केही कुरा बाढ्न पाएको छु । जुनकुरा मेरा साथीहरु अनि जो सुकैले पनि संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर सजिलै हेर्न सक्छन् । अरुका ब्लग हेर्ने बानीको विकास भएको छ । जसबाट मेरो ज्ञान र सीपमा झन् निखारता आउने छ भन्ने मलाई लागेको छ । मैले खिचेका फोटोहरुको सदुपयोग भएको छ । उपलब्धिका कुराहरु धेरै छन् । तर कहिलेकाँही मेरा समकक्षी मित्र जीवन लामाले तिमी अलि न्यु मिडियामा बढी ध्यान दिने हुँदा अरु काममा अल्छी भयौ भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ ।
ब्लग लेख्न चाहने र लेखिरहनु भएकाहरुलाई यहाँका केही कुरा छन् भन्नुपर्ने ?
ब्लगमा आफ्ना कुरा त लेखिन्छ नै अरुका कुरा पनि लेख्ने गरौं, अरुका विचार र भावनाहरुलाई पनि सम्मान गरौं । उनीहरुका कुरालाई हामीले सार्वजनिक गरिदिनाले कतिपयको राम्रो पनि भएको हुन्छ । अनि ब्लगिङ गर्दा सामान्य रुपमा भए पनि आचारसंहिता र नियमहरुको ख्याल गरौं । जानकारीका लागि मेरो रिर्पोटमा भिजिट गर्दा पनि हुन्छ । ब्लगमा लेखेका कुरालाई फेसबुक र ट्वीटरबाट पनि शेयर गरौं । यसले भिजिटर बढ्नमा सहयोग पुग्छ । यति नै हो ।
सर्वप्रथम त मेरोरिर्पोटको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। मलाई ब्लग लेखनका लागि चरिकोटमा आएर हौसला दिने पत्रकार दाई इन्द्रध्वज क्षेत्रीप्रति निकै आभारी छु । ब्लग लेखनको मेरो यात्रा धेरै लामो भएको छैन । अझै पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ । म त्यसको लागि प्रयासरत रहनेछु । यसरी नै ब्लग र सोसल मिडियाका बारेमा बहस गर्न पाइयोस, धन्यवाद ।
Comment by uma thapamagar on December 31, 2012 at 8:56am
badhai cha sathi
Comment by Arjun Apawad on December 28, 2012 at 10:59am
सेर बहादुर भुजेल साताको ब्लगर हुनुभायाकोमा बधाई ।
केहि प्रस्ट पर्नुपर्ने ठानेको छु मेरो नाम पनि अंतर्बर्तामा जोडिएका कारण
म2वर्ष देखि ब्लग चलौन्छु
ब्लग सुरु गर्न इक्वेल याक्सेस को कुनै भूमिका छैन
Comment by sherbhhadur bhujel on December 27, 2012 at 12:54pm
Thanks Durga miss
Comment by Durga Lamichhane on December 27, 2012 at 11:06am
Congratulation Sher ji! All the best for your future on writing!
Comment by sherbhhadur bhujel on December 27, 2012 at 10:20am
Thanks Pagal Basti lai pani
Comment by Pagal Basti on December 26, 2012 at 5:21pm
शेर बहादुर भुजेल ज्युलाई बधाइ। स्विकार होस
Comment by Equal Access on December 26, 2012 at 4:51pm
Badhai chha Sher jee!
Comment by sherbhhadur bhujel on December 26, 2012 at 4:47pm
धैरै धेरै धन्यवाद छ क्रान्ति, कृष्ण गुरागाई, अनि बिदुर सबैलाई
Comment by अल्टर कान्छो’ on December 26, 2012 at 4:36pm
Comment by Krishna Guragain on December 26, 2012 at 4:35pm
धेरै धेरै बधाई शेर बहादुर जी :) तपाईको ब्लगिंग यात्रा फलोस फुलोस् :)
Comment by Kranti Darai on December 26, 2012 at 3:51pm